पुस फासफुस किन भनिएको होला ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः पुस १४, २०७५ - साप्ताहिक
उखान टुक्का मिलाएको मात्र हो ।
मंसिर र माघ बिहेका महिना भएर सजधज, सफासुग्घर भएर हिँड्छन् तर पुस काम न काजको चिसो महिना, मुख पनि नधोई फासफुसमै बिताइने भएर ।
पुस महिनामा हिउँ पर्छ, हिउँ पर्दा फुसफुस गरी झर्ने भएकाले ।
मंसिरका जोडीहरू दिक्क भएर मंसिर जस्तो पुसमा आनन्द महसुस गर्दैनन् त्यसैले ।
मान्छे चौध घण्टा सुत्छ अनि उज्यालोमा जम्मा ९/१० घण्टामात्र बित्ने हुँदा फासफुस ।
कविता चिन्तन यात्रा
मंसिरमा बिहेको लगन नजुरेकाहरूलाई माघमा जुराउन प्रोत्साहन दिँदै पुस त फासफुस गैहाल्छ त्यसैले ।
अल्छी भएर ।
बिहान ८ बजे उठ्यो । बेलुका ६ बजे सुत्यो । जम्मा १० घण्टा । महिनामा ३०० घण्टा हल्लिएर ४ सय २० घण्टा सुतेर बिताउनुलाई फासफुस नभनेर के भन्ने त ?
झास झुस बाली आगो तापेर चिसोलाई फासफुस पारिने भएकाले ।
मिलिक्क आउने पिलिक्क जाने भएर ।
दिन छोटा र रात लामा हुने भएकाले ।
पुसमा हुस्से फासफुस फासफुस लाग्न थाल्या हुन्छ । त्यसैले पुस–फासफुस भनिएको होला ।
घामको अनुहार न देखि जाने छोटो दिन, कुनै विशेष काम गर्नै नभ्याइने, पुस अनि फुस मिलाएर बनाइएको थेगो हुनुपर्छ ।
पुस फासफुस बूढाबूढीहरूले भन्न थालेको हुनुपर्छ, किनभने अन्य दिनहरू लामा र पट्यार लाग्दा हुन्छन पुसका दिन छोटा हुन्छन् र रात निन्द्रामै बित्छ । यसरी दिन बितेको पत्तै नहुने भएकाले यसो भनिएको हुनुपर्छ ।
पुस महिनालाई रित्तो महिनाका रूपमा लिइन्छ । यो महिना कुनै पवित्र वा धार्मिक कार्य पनि नहुने भएकाले पुसलाई फासफुस भनिएको हो ।
भूपेन्द्र शाहा ठकुरी
वास्तवमा पुस फासफुस नै हो । एक त छोटो दिन त्यसमाथि चिसोका कारण तातोको जोरजाम गर्दैमा माघ महिनाले हस्तछेप गरिहाल्छ ।
मंसिरमा बिहे गर्‍यो, हनिमुन चलिरहेको हुने, कतिबेला उज्यालो हुन्छ पत्तै नहुने, बाले बोलाउँदा १० बजेको हुने, भात खायो, यसो घाम ताप्यो, कृषिको काम नहुने, जाडो बढी हुने, फेरि सिरकभित्रै पस्न मन लागिहाल्ने त्यसैले पुस फासफुस ।
छोटो महिना, चिसो महिना, भर्खरै (मंसिरमा) अनाज भित्र्याइएकाले किसानको ढिकुटी भरिभराउ हुन्छ पेटभर खाएर सुत्दा सुत्दै भुसुक्कै महिना गैहाल्छ, त्यसैले ।
जाडोले गर्दा आगो फुकीफुकी ताप्नुपर्ने हुनाले पुस महिनालाई फासफुस भनिएको हो ।
घाम ताप्ने धित नमर्दै दिन बित्न्ने र महिना सकिने अनि दिन छोटा अनि रात लामा हुने र अबेर बिहानसम्म बिस्तरा छोड्न नसकिने भएकाले ।
अबेर मात्र सूर्योदय हुने र चाँडै सूर्यास्त हुने भएकाले केही काम गर्न भ्याइँदैन । यसरी फासफुस गरेर समय ब्यतित हुनेभएकाले यो महिनालाई फासफुस भनिएको हो ।